Xildhibaannada Golaha Shacabka oo maanta ka doodaya Sharciga Doorashooyinka Qaranka – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in mar kale ay ka doodaan hindise sharciyeedka Doorashooyinka Qaranka iyo ajandayaal kale.
Qaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha shacabka ayaa kulankii shalay fikradahooda ka dhiibtay akhrinta 2aad ee hindise sharciyeedka doorashooyinka Qaranka oo maalmahan ay mudanayaasha si adag uga doodayeen Xildhibaanada.
Guddomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman ayaa Xildhibaannada u sheegay in Golaha uu maalin walba uu shaqayn doono ilaa iyo inta laga ansixinayo sharci doorasho oo uu dalkan yeesho.
Doorashada sanadkan ka dhici doonta dalka Soomaaliya, ayaa waxaa kasoo horjeedo xildhibaanno badan, waxaana guddiga ay ku edeynayaan in aysan soo bandhigin wixii laga sugayay.
Doorasho Qof iyo Cod ah, ayaa dowladda ay wali ku adkeysaneysaa in ay ka dhici doonto dalka Soomaaliya, waxaana ay u muuqataa in aysan suura-gal aheyd.
Si aad u la socoto kulanka maanta ee xildhibaannada la soco Website-kaanna…..